ထိပ်တန်း 10 ဂန္ထဝင်ရော့ခ်မတ်ေတာသသီချင်းများ
စာပေ ထိပ်တန်းစာရင်း Picks
by Dave ဖြူ
သင့်ရဲ့ဂန္ထဝင်ရော့ခ် Sweeties များအတွက် Valentine Day ကို Inspiration
သေချာဖြစ်စေရန်, ဂန္ရော့ခ် eardrum တရားမဝင်တ္ထုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝတရား၏ escapades ၏ဂရပ်ဖစ်ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုအကြောင်းကိုသီချင်းတွေကို busting, ခက်မောင်းနှင်မှု၎င်း၏ဝေစုထက်ပိုရှိခဲ့ပါတယ်။ များလွန်းခြင်းနှင့်ယခုနှစ်၏အခြား 364 ရက်ပေါင်း - ဒါအများကြီးဒါကြောင့်အမျိုးအစားလည်း Valentine Day ကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအခြို့သောနှလုံးပါချစ်ခြင်းမေတ္တာသီခငျြးမြား, ထုတ်လုပ်ကြောင်းမေ့လျော့ဖို့လွယ်ကူပါ
ဒီမှာစာရင်းဖွဲ့သော 10 ဂန္ဖြစ်ကြသည်။
ရှင်ပေါလု McCartney နဲ့ John Lennon တဲ့အခါမှာသီချင်းတစ်ပုဒ်ဂျော့ခ်ျ Harrison ရေးသားခဲ့သည်, နှင့် The Beatles မှတျတမျးတငျထားသောအကောင်းဆုံးအကြား, ထိုအမှန်ပင်မြင့်သောချီးမွမ်းခြင်းကိုဖွင့်သောအကောင်းဆုံးများထဲမှခေါ်ဆိုပါ။ အဲဒါကိုအတုယူမြှောက်၏ sincerest ပုံစံကြောင်းကိုစစ်မှန်သောင် အကယ်. အခြားအနုပညာရှင်တွေအများကြီးအတူတူခံစားမိ; ကပေါ်သည်ထင်ရှားကတည်းကသူတို့ထဲက 150 ကျော် "တစ်ခုခု" မိုးပြီ Abbey လမ်းမကြီး 1969 တွင်။
"သင်ဒီတော့တင့်တယ် Are" ၏ဂျိုး Cocker ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပေးပို့သူ၏လက်မှတ်သီချင်းများထဲကတစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ငါ Little ကရိန်းရပ်နိုင်သလား Cocker ရဲ့ 1974 အယ်လ်ဘမ်အပေါ်ဖြန့်ချိပါကမူလက၏ Dennis Wilson ကအတူကပူးတွဲရေးသားခဲ့သည်သူကို Billy Preston, ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ် အဆိုပါသဲသောင်ပြင် Boys (တစ်ခါတစ်ရံတိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည် encores ၌ဖျော်ဖြေသူ), ဒါပေမယ့်သူကအစဉ်အမြဲနှင့်ဆက်စပ်ပါလိမ့်မည် အဆိုပါကျောက်စရစ်-ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဘလူး rocker ။
ဖရက်ဒီမာကျူရီသက်တမ်းကြာအဖော်, မာရိ Austin နှငျ့သူ၏ဆကျဆံရေးတို့က "ကျွန်မအသက်တာ၏မေတ္တာတော်" ရေးသားဖို့မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအော်ပရာမှာတစ်ဦးကညပေါ်မှာ 1975 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခြင်း, သီချင်းဘုရင်မကြီးဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကိုသီဆိုခဲ့စဉ်မာကျူရီမကြာခဏအသံတိတ်တည်းခိုနိုင်အောင်ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ဘရိုင်ယန်ကမေလ 12-string ကိုဂစ်တာအပေါ်မာကျူရီနှင့်ပရိသတ်ကိုပူးတွဲအတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက် acoustic ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တစ်ခုနီးပါး operatic အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူသီချင်း, မာကျူရီရဲ့အံ့သြဖွယ်အသံအကွာအဝေးပြသနိုင်ခဲ့သည်။
လှံတံ Stewart ကကဲ့သို့ဆက်ကပ်အပ်နှံဘောလုံးပရိတ်သတ်သူနှစ်ဦးကိုအကြိုက်ဆုံးအသင်းများကို ( "သငျသညျဆဲလ်တစ်နှင့်ယူနိုက်တက်အနေဖြင့်") ထက်ကိုတောင်ပိုမိုကောင်းမွန်မယ့်မိမိချစ်ခင်၏အရာဝတ္ထုကိုပြောပြသည့်အခါ, ထိုစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာပဲ! Stewart ကမိမိအ 1977 Foot ချောင် & Fancy အခမဲ့အယ်လ်ဘမ် 'သင်တို့သည်ငါ၏နှလုံးသားမှာတော့နေ "ရေးသားခဲ့သည်။
ခဲအဆိုတော်နှင့် bass သမားပတေရုသ Cetera နှင့်ထုတ်လုပ်သူဒါဝိဒ်သည် Foster မူလက Kenny ရော်ဂျာများအတွက် "သင်ဒီ Inspiration နေ" wrote ပေမယ့်ရော်ဂျာကအပေါ်လွန်သောအခါ Cetera အတူသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ် 1984 ခုနှစ်ချီကာဂို 17 ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ထည့်သွင်းရန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ ချီကာဂို တစ်ကိုယ်တော်မသွားမီ ။ အဆိုပါသီချင်းသစ်အယ်လ်ဘမ်တီးဝိုင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးရောင်းချသူအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။
ခက်ရော့ခ်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံခြားသား သည့် 1984 ခုနှစ်အေးဂျင့် Provocateur အယ်လ်ဘမ်တွင် "ငါသည်အဘယ်သို့ချစ်ရာရောက်၏သိလို" ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သီချင်းပါဝင်သည်, သူတို့ကသိသာလျင်မြန်စွာအမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်၌နံပါတ် 1 ကဖန်ဆင်းတော်မူသောသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့စိတျဝငျစားလုပ်ကြံလေ၏။ ဒါဟာပွဲတစ်ပွဲတီးဝိုင်းအကောင်းဆုံးလူသိများသည်အရာများအတွက်သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားပူးတွဲတည်ထောင်သူ Mick ဂျုံးစ်အားဖြင့် Written, သီချင်းဧဝံဂေလိတရားကိုအုပျစုနယူးဂျာစီပြည်နယ် Mass Choir, မင်းသမီး-အဆိုတော်ဂျနီဖာ Holliday နှင့်ပေါ့ပ်နှစ်လုံးကို Thompson ကအမွှာပူးနေဖြင့် backup လုပ်ထားအသံပါရှိပါတယ်။
ကနေနှစ်ခုထိပ်တန်း 40 ဆိုရင် single တစ်ခုမှာ လင်းယုန် '' 1994 ခုနှစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအယ်လ်ဘမ်ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံခဲကျော်, "မေတ္တာအသကျရှငျကြှနျုပျတို့ကိုသိမ်းဆည်းထားပါမည် 'တိကျမ်းစာ၌လာသည်ဒါမှမဟုတ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များကပူးတွဲကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်သောအယ်လ်ဘမ်ပေါ်တွင်သာသီချင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ traffic ပူးတွဲတည်ထောင်သူဂျင်မ် Capaldi အဆိုပါသီချင်း Co-ရေးသားခဲ့သည်။ bass သမားတိမောသေခ Schmit ခဲအသံဖြစ်သည်။
တူညီသောအယ်လ်ဘမ်သည်, မိမိဇနီး, Patti ဘှိုငျဒျအကြောင်းထိထိမိမိချစ်ခြင်းမေတ္တာသီချင်း (သူ၏မိတ်ဆွေကောင်းဂျော့ခ်ျ Harrison ၏ဇနီးတစ်ကြိမ်မှာလည်းသူ) ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏ "ကင်း" ဆောင်ခဲ့သော။ အဲရစ် Clapton သီချင်းကိုရေးသားခဲ့သည်ဟုတ်ကဲ့, တူညီတဲ့အနုပညာရှင် Slowhand အဘို့, 1977 ခုနှစ်မှာဖြန့်ချိ, ဒါပေမယ့် "အံ့သြဖွယ်ယနေ့ည" တစ်ခုတည်းအဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်ရှေ့မှာအခြား 14 နှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲလစ် Cooper ကကဲ့သို့အပင်ထိတ်လန့် rocker တစ်ဦးနူးညံ့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသီချင်းချွတ်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့သူကအမေရိကန်, သူ 12 နှစ်အကြာတွင်သည်အထိနောက်တဖန်ကိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဇယားအနေအထားအတွက်ထိပ်တန်း 10 ဦးထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း 1977 ခုနှစ်မှာဇာပန်းထည်များနှင့်ဝီစကီအပေါ်ဒီတော့ကောင်းစွာဒီတစ်ခုကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ "သင်ငါ့ကို" အရာကျွန်တော်တို့အများစုကအလွယ်တကူဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်မှပျမ်းမျှအလုပ်လုပ်ခိုင်မာသောတစ်ခုခုရဲ့ရှုထောင့်ကနေမတ်ေတာအကွောငျးဖြစ်ပါတယ်။
"တောရိုင်းမြင်း" ပုံမှန် Rolling Stones သီချင်းပေမယ့်ဘာမှဖြစ်ခဲ့သည်။ 1971 ခုနှစ်တွင်ရှုပ်ထွေးသော Fingers အပေါ်ဖြန့်ချိပါကနှေး, acoustic သီချင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သီချင်း Mick Jagger, Keith Richards နှင့်ကရေးသားခဲ့သည် Gram Parsons အတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့အဖုံး၏များစွာ၏ပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသောသူကို (ပျံ Burrito ညီအစ်ကိုတို့, အဆိုပါ Byrd) ။
ကျောင်းဆင်းပွဲလက်ဆောင်များအဖြစ် Give6စာအုပ်များ
အာဖရိကန်အမေရိကန်လတ်ြလပ်ခတိုက်လေယာဉ်နှင့် ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးကလေးစာအုပ်များ
ထိပ်တန်း 10 Santana သီချင်းများ
'' 80s တီဗွီရှိုးများအဘို့အထူးသဖြင့်ရေးစပ်ထိပ်တန်း 10 ဂီတ Themes
ကို '80s ၏အနည်းဆုံးထိုက်နံပါတ်တစ်ခုမှာ Hits
ကို '80s အများစုဟာအလွမ်းဂီတသေဆုံးမှု
ကို '80s အများစုဟာအမှတ်ရဖွယ် Pop-Rock ကခရစ္စမတ်နှင့်အားလပ်ရက်သီချင်းများ
Chole (စပ်ကုလားပဲဟင်း) ရုပ်ပြကြော် Make လုပ်နည်း
ဖလော်ရီဒါအတ္တလန္တိတ်တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ဘယ်လိုအများကြီး Do ဂေါက်သီးရိုက်ဒုတ်ကုန်ကျစရိတ်?
အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်: အပိုဒ်ငါပုဒ်မ 9
Omo Kibish (အီသီယိုးပီး) - အစောပိုင်းမော်ဒန်လူသားတွေဟာ၏ရှေးအကျဆုံးဥပမာ
Whitman ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Millibars မှ Square ကိုလက်မသို့မဟုတ် PSI Per ပေါင် converting
ပြောင်းဖူး၏ The Magic
နှင်းလျှောစီး Trail Ratings အဖွဲ့ကိုနားလည်ခြင်း
'' အဆိုပါ Jolly က Black မုဆိုးမ '' ထိန်း Doss ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
Stop ဗျည်း (အသံထွက်)
ကရူ Giuliani Quotes
Pêcher - ငါးမှ
Auxiliary ကြိယာ: ပြင်သစ် Grammar နှင့်အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ